Arab Air Carriers Association: VJ Poonoosamy ka onye isi oche nke ndị isi adịghị mma
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Arab Air Carriers Association: VJ Poonoosamy ka onye isi oche nke ndị isi adịghị mma
Airlines • Airport • Akụkọ mkpakọrịta • Na-agbasa News Travel • Education • Akụkọ Ọchịchị • Akwụkwọ akụkọ Kuwait • News • ndị mmadụ • Technology • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Ndi Arab Airports Association (AACO) na - ezukọta ugbu a na Kuwait maka AACO 52nd Nzukọ Izugbe. Taa na echi n'okpuru Onye Nlekọta nke Onye Isi Onye Isi nke Prime Minister nke State nke Kuwait, Sheikh Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah, na site na ịkpọ oku nke Mr. Yousef A. ALJassem Al-Saqer / Onye isi oche nke Kuwait Airways na Onye isi oche nke ndị isi AGM nke 52 ga-ekwurịta okwu ndị dị mkpa gbasara ụlọ ọrụ Arab Airline.
AGM bu ihe omume buru ibu na kalenda AACO nke na-eme ka ndi isi ulo oru nke ndi otu ugbo elu nke 33 gbakwunye na otutu ndi nwere oke, AACO ndi oru ugbo elu na ndi otu ulo oru, tinyere ndi oru ndi ozo na ndi obodo ndi gbakotara maka ubochi abuo nke IZIRingTA , na-atụgharị uche n'okwu metụtara ụlọ ọrụ na mkparịta ụka dị elu.
Iguzo ọtọ zuru ụwa ọnụ dị ka mkpakọrịta nke na-eje ozi na nraranye ụgbọ elu ndị Arab ma bụrụ ihe enyemaka iji soro ụlọ ọrụ ụgbọ elu na-agbanwe agbanwe.
Ebumnuche AACO bụ ijere ndị ụgbọ elu ndị Arab ozi, na-anọchite anya ọdịmma ha, ma kwado, n'ụzọ kwekọrọ na asọmpi niile na iwu ndị ọzọ, nkwado ha iji melite arụmọrụ ha na ijikwa ọha na eze na-agagharị.
Iji kwado nkwado ụgbọ elu ndị Arab maka ụkpụrụ nchekwa na nchekwa kachasị elu.
Iji kwado nkwado ụgbọ elu ndị Arab maka imepụta atumatu gburugburu ebe obibi ha maka usoro kwekọrọ na gburugburu ebe obibi.
Iji tinye aka na mmepe nke ọrụ mmadụ.
Iji soro ndị na-achịkwa iwu na-emekọ ihe iji kwado ma kpuchido ọdịmma nke ụgbọ elu ndị Arab.
Launchmepụta ọrụ nkwonkwo n'etiti ụgbọ elu ndị otu na ebumnuche nke iru arụmọrụ nke ga-ebelata ụgwọ ha n'ụzọ kwekọrọ na asọmpi niile na iwu ndị ọzọ yana nke na-akwalite omume kacha mma nke ndị otu.
Iji nye forums maka ndị òtù na maka ụlọ ọrụ mmekọ aka na ihe ọmụma ndabere.
Iji gosipụta ọdịdị dị mma nke ụgbọ elu ndị Arab na ụwa.
Ibido na mejuputa Specific, Measurable, Attainable, Relevant, and Time-bound synergistic targets (SMART) nke na-enyere ebumnuche ya aka.
Ihe ngosi nke ihe omume na-aga n'ihu ga-abụ otu mkparịta ụka a maara dị ka Ngalaba CEOs ga - eme n'oge nke atọ na - arụ ọrụ na Tuesday 5 November 2019 n'etiti 15: 00 rue 16: 00 wee kpọkọta ndị isi ndị isi na ndị na - eme mkpebi na arụmụka otu awa banyere esemokwu dị na ụlọ ọrụ ụgbọelu. Ndi otu CEOs ‘Maazi Vijay Poonoosamy / Director, International and Public Affairs / QI Group ga-ahazi ya.
Maazị Vijay Poonoosamy
Director, International na Ọha Okwu /
Captain Ahmed Adel
Onye isi oche na onye isi oche
Alọ ọrụ na-ejide ụlọ ọrụ EgyptAir
Maazị Abdulmohsen Jonaid
Ndị Saudi Saudi Arabia
Maazị Henrik Hololei
Director General maka Mbugharị na Transportgbọ njem